झुम्का स्थित क्षेत्रिको आफनै घरमा हत्या भएको ठहर…….भाडामा बस्दै आएका लागुऔषध प्रयोग कर्ता रमेश राईले हत्या गरेको सार्वजानिक. – Radio Ramdhuni 91.9 Mhz
ON AIRथारु गीतहरु
बलमैत्रि स्थानिय शासन सम्बन्धि अभिमुखिकरण
युवा स्वरोजगारकालागी शिप तालिम छनौट
रामधुनीका किसानलाई खण्डित जग्गा एकिकृतगरी सामुहिक खेतीमा प्रोत्साहन सिकाई
रामधुनी नगरमा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको सितभण्डार र ईटहरीमा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजबजार प्रवद्र्धनलागी डिपिआर तायर : कृषि राज्य मन्त्रि चौधरी
रामधुनीका वडाकार्यालय भवनका लागि १४ लाख ९७ हजारमा ठेक्का सम्झौता,
सुनसरीमा नेपाली काङग्रेसद्वारा राष्ट्रिय जागरण अभियान
झुम्का स्थित क्षेत्रिको आफनै घरमा हत्या भएको ठहर…….भाडामा बस्दै आएका लागुऔषध प्रयोग कर्ता रमेश राईले हत्या गरेको सार्वजानिक.
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ०३, २०७५ समय: १२:४९:४९
झुम्का,फाल्गुन ३ । तिन दिन अगाडी झुम्कामा नरबहादुर भण्डारी (क्षेत्रि)को हत्या भएको ठहर गर्दै प्रहरीले सार्वजानिक गरेको छ । हत्यारा २५ बर्षिय रमेश राईलाई पक्राउ गर्दै सार्वजानिक गरेको हो । अनुसंधानबाट लुटपाट र हत्या भएको अवस्थाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय ईनरुवामा सुक्रवार सार्वजानिक गरेको छ ।
हत्या गरेर लुटपाट गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । सोमवार राति क्षेत्रिको आफनै घरमा हत्या भएको थियो । घटना भने बिहान ७ः३० बजे प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो । क्षेत्रिलाई हत्यागरी राईले घरबाट दुईवटा मोबाईल,४० ईन्चको एलईडि टिभि,सुनको औठि ग्यास चुलो लिएर हिडेका थिए । प्रदेश स्तरीय टोलिले अनुसंधान गर्दै राई ईटहरी १७ पकलीबाट काठ फर्निचरमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा बुधवार पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राई झुम्का छोडेर ईटहरी ५ मा डेरागरी बस्दै आएका थिए । संखुवासभा साबिक पावखोला गाबिस वडा नं. ५ हाल मकालु गाउपालिका वडानं ५ का हुन् । उन्ले पेन्टरको काम गर्दै आएका थिए । हत्यारा राईलाई ज्यान सम्बन्धि कसुर मुद्धामा सम्मानित जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप गरी थप अनुसंधान गरिरहेको छ । घटनामा अरु संलग्न नरहेको जानकारी दिएका छन् ।
घटना यसरी भयो………………
घटना भएको राति राई लेडिज साईकलबाट एकलै आएका थिए । साईकल बाहिरै राखि दुई तल्ले पक्की घरको पुर्व रहेको सौचालयबाट माथि चढेका थिए । भुई तल्लाको चेन गेट लागेकाले सौचलयबाट माथि चढेर गएको राईले बयान दिएका छन् । बयान अनुसार सो दिन भने क्षेत्रिले माथिल्लो तल्लामा चेन गेट र कोठाको ढोका खुल्लै राखेका थिए । त्याहाबाट गएर माथिल्लो तल्लामा रहेको किचेनमा एकछिन लुकेर क्षेत्रिको कोठा तर्फ गएको बताएका छन् । कोठा जादा त्यही हत्या गरेको बयानमा भनेका छन् । घटनाकै सोहि राति साईकलमा टिभि बोकेर ईटहरी तर्फ लागेका थिए । चेकिङ्ग गर्ने स्थानमा दुई गाडिको बिचबाट गएको बताएका छन् । ब्यक्तिगत रिसिबिका कारण उन्लाई हत्यागरी लुटपाट गरेको बयान दिएका हुन् ।
पक्राउपर्दा उन्को साथबाट मोबाईल दुई थान,४० ईन्चको सोनि ऐलईडि टिभि,ल्यापटप,लेडिज साईकल,भाचिएको अवस्थामा रहेको एनटिसी र एनसेल को सिमकार्ड,काचको थाल ३ थान,कार्डरिडर,सुनको सिक्री र २ हजार दुई सय पचार रुपैया बरामद भएको छ । उन्ले सामान लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।
राईल लागु औषध दुब्र्यसनि प्रयोग कर्ता हुन् । डेरा कोठा बदली रहने गरेका थिए । मृतकको घरमा पहिले डेरा लिई बसेको अनुमानित २ महिना अघि डेरा छोडी गएका थिए । राईले घरपेटिलाई काममा सघाईदिने गरेका थिए । पछि भाडा माग्दा सोहि बिषयमा झगडा हुदा ब्यक्तिगत रिसिबि भएको थियो भन्ने बयान अनुसार जानकारी प्राप्त भएको हो । घटना नजिको चिनजान,आर्थिक लेदेन,ब्यक्तिगत रिसिबि भएको खुलेको छ ।
अनुसंधानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब उपरिक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयालको नेतृत्वको टोलि,१ नम्बर प्रदेश प्रहरीबाट प्रहरी निरिक्षक लेखनाथ दाहालको नेतृत्वको आरआईटि टोली र ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षक जितेस दाहालको नेतृत्वको टोलि अनुसंधानमा खटिएको थियो ।
sabda sangeet falgun 8 final Download Listen
sabsa sangeet 2075 baishak 12 Download Listen
कार्यक्रम शब्द संगित चैत्र २८ Live Download Listen
Ramdhuni IDOL bhadra ra Ashoj ko Final ashoj 28 Download Listen
Ramdhuni Idol Magh 26 final round Download Listen
prem ke sanesh new episod Download Listen
रामधुनी बहसमा फिल्मकर्मीहरु संगको कुराकानी Download Listen
शनिदेव भजन 05 : 00 - 06 : 00
आजको राशिफल 07 : 30 - 08 : 00
कार्यक्रम "सफल जीवन" 09 : 00 - 10 : 00
कार्यक्रम "बाल आवाज" 10 : 10 - 11 : 00
कार्यक्रम "हेल्दी टिप्स" 12 : 10 - 13 : 00
कार्यक्रम "रमाईलो शनिवार" 13 : 00 - 14 : 00
कार्यक्रम "के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु" 15 : 10 - 16 : 00
आधुनिक नेपाली गित 16 : 00 - 17 : 00
थारु गीतहरु 18 : 00 - 19 : 00
कार्यक्रम "स्विट ड्रिम" 19 : 30 - 20 : 30
काठमाडौंमा ५ रेक्टरको भूकम्प
© २०७१–२०७६ सर्वाधिकार सुरक्षित, रेडियो रामधुनी ९१.९ मेगाहर्ज